February 12, 2019 February 12, 2019 Internet Khabar
विदेशबाट पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ? यस्तो छ आज माघ २९ गतेका राष्ट्र बैँकले तोकेको विनिमयदर
इन्टरनेट खबर डेस्क माघ २९ काठमाडौँ ।आज मिति वि.सं. २०७५ साल माघ २९ गते मंगलबार तदनुसार इस्वी सन २०१९ फुब्रुअरी १२ तारिख, नेपाली बजारमा आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार तोकेको छ।
आज नेपाल राष्ट्र बैँकले तोकेको विनिमयदर अनुसार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको खरिददर मूल्य १ सय १३ रुपैयाँ ५८ पैसा छ भने विक्रिदर मूल्य १ सय १४ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ।त्यस्तै यूके पाउण्ड स्टरलिङ्ग को खरिददर १४६ रुपैयाँ ८१ पैसा छ भने बिक्रिदर १४७ रुपैयाँ ५८ पैसा छ।
त्यस्तै एक मलेसियन रिंगिटको खरिददर मूल्य २७ रुपैयाँ ८९ पैसा छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ०४ पैसा छ।त्यसैगरी एक साउदी रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ २८ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४४ पैसा छ। त्यस्तै, एक कतारी रियाल खरिददर ३१ रुपैयाँ १९ पैसा छ भने विक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ। त्यसैगरी युएई दिराम १ को खरिदर ३० रुपैयाँ ९२ पैसा छ भने विक्रिदर ३१ रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको छ ।
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् आज कति पुग्यो?
आज बुधबार घट्यो कि बढ्यो सुन-चाँदीको मूल्य ? हेर्नुहोस् बजारभाउ
आज कुवेत र बहरायनको मुल्य बढ्यो, अन्य देशको कति ?
भिवोर र सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैङ्क आपसमा गाभिने